कहाँ उत्पति भयो कोरोना भाइरस?-CRI
चालु वर्षको जनवरीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र चिनियाँ विज्ञ सम्मिलित संयुक्त विज्ञ समूहले चीनमा २८ दिने कोभिड-१९ भाइरस स्रोतको खोजी अनुसन्धान गरेको थियो। गत मार्च ३० तारिख विश्व स्वास्थ्य संगठनले औपचारिक रूपमा संयुक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी वुहान प्रयोगशालाबाट भाइरस चुहिन संभव नभएको स्पष्ट निश्कर्ष निकालेको थियो।
चीनको वुहान प्रयोगशालाबाट नयाँ कोरोना भाइरस चुहिएको छैन भन्ने केही आधारहरु सार्वजनिक भएका छन्। उक्त प्रयोगशालामा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारी वा अध्येताहरूमा कोभिड-१९ भाइरस संक्रमण भएको छैन। वुहान प्रयोगशालामा कुनै कोरोना भाइरससित सम्बन्धित अध्ययन पनि भएको थिएन।
जब अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठनमा फर्कियो तब उसले संगठनमाथि दवाव दिन थाल्यो। फलत अमेरिकाले संगठनलाई नै राजनीतिकरण गर्न थालेको छ। अहिले आएर अमेरिकी दवावमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि दोहोर्‍याएर वुहान प्रयोगशालामाथि छानबिन गर्ने धारणा सार्वजनगिक गरेपछि नयाँ शिराबाट वहस सुरु भएको हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई उक्त प्रयोगशालाको छानबीन गर्नका आग्रह गर्दै १ करोड ४० लाखभन्दा बढी चिनियाँ इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्। अमेरिकाको उक्त प्रयोगशालामाथि छानबिन हुनुपर्ने कुरा चिनियाँले मात्र उठाएका होइनन्। रुसी पत्रकार एवं इतिहासकार सर्गेई ल्याटिसले 'रहस्यमय अमेरिकी फोर्ट डेट्रिक प्रयोगशाला नयाँ कोरोना भाइरसको वास्तविक स्रोत हुनसक्छ' शीर्षकमा एक विश्लेषणात्मक लेख सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उक्त लेखमा वाशिङगटनले सधैँ नयाँ कोरोना भाइरसको स्रोत भन्दै चीनलाई साबित गर्न प्रयास गरिरहेको तर भाइरस स्रोतका सम्बन्धमा अमेरिकाभन्दा चीन धेरै भरोसायोग्य रहेको औँल्याइएको छ। फिलिपिन्सका प्रसिद्ध राजनीतिक टिप्पणीकार हर्मन टियू लाउरेलले पनि एक लेख प्रकाशन गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई उक्त प्रयोगशालाको छानबिन गर्न आह्वान गर्नु भएको छ।
अमेरिकी फोर्ट डेट्रिक प्रयोगशालामाथि विश्वव्यापी औँला उठाइनुका पछाडि केही कारणहरु रहेका छन्। सन् २०१९ को जुलाईमा अमेरिकामा दुईटा असामान्य घटना एकै साथमा भएका थिए। उक्त समयमा अमेरिकी सेनाले फोर्ट डेट्रिक प्रयोगशालालाई आकस्मिक बन्द गरायो। तत्कालीन समयमा अमेरिकाका धेरै राज्यमा एक प्रकारको निमोनियाको प्रकोप देखा परेको थियो। त्यो निमोनियालाई 'ई-सिगरेट निमोनिया' भनियो। त्यसका लक्ष्यण नयाँ कोरोनासँग धेरै मिल्दोजुल्दा थिए। एकातिर अमेरिकामा नियमोनिया फैलिनु र अर्कातिर उक्त प्रयोगशाला आकस्मिक रुपमा बन्द गरिनुका पछाडि उक्त प्रयोगशालाबाट भाइरस चुहिएको शंका सर्वत्र रहेको छ। उक्त प्रयोगशालाले जापानी सेनाको '७३१ प्रयोगशाला'को डाटा प्रयोग गरेको मानिन्छ। '७३१ प्रयोगशाला' जापानले खडा गरेको त्यस्तो प्रयोगशाला थियो जुन दोस्रो विश्वयुद्धताका चिनियाँको नरसंहार गर्नका लागि जैविक हतियार उत्पादनमा प्रयोग भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले जापानसँग गोप्य सम्झौता गरी उक्त प्रयोगशालाका डाटा लगेको थियो। फोर्ट डेट्रिक प्रयोगशालासँगै अमेरिकाले आफ्नो देश बाहिर संचालन गरेका दुई सयभन्दा बढी जैविक प्रयोगशालाको पनि छानबीन गर्नुपर्ने दवाव विश्व स्वास्थ्य संगठनमाथि परेको छ।
कोरोना भाइरसको स्रोत खोजीको विषय तातो वहस भइरको बेला चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क 'सीजीटीएन थिङ्क ट्याङ्क'ले विश्वव्यापी इन्टर्नेट प्रयोगकर्तामाझ एक सर्वेक्षण गरेको छ। जुन २४ तारिख बिहान शुरू भएको उक्त जनमत संग्रह संयुक्त राष्ट्र संघका आधिकारिक भाषा चिनियाँ, अंग्रेजी, रूसी, फ्रान्सेली, स्पेनेली र अरबेली भाषामा संचालन गरिएको हो। जुलाई २५ तारिख राती १० बजेसम्म सो सर्वेक्षणमा भाग लिएकाहरूमध्ये, ट्विटरमा स्पेनेली भाषा प्रयोगकर्ता ९० प्रतिशतले कोरोना भाइरसको स्रोत विषय राजनीतिकरण भइसकेको विचार व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी फ्रान्सेली, रूसी र अंग्रेजी भाषाका क्रमशः ८८, ८३ र ७० प्रतिशत प्रयोगकर्ताहरूले उक्त विचार व्यक्त गरेका छन्। चिनियाँ माइक्रोब्लग विइपो (चिनियाँ ट्वीटर) मा ९५ प्रतिशत इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताहरूले सो विषयलाई राजनीतिकरण गरिएको बताएका छन्।
सर्वेक्षणमा मूलतः तीनवटा प्रश्नहरु सोधिएका थिए। ती प्रश्नहरुमाः 'कोरोना भाइरस स्रोतको खोजी कार्यलाई राजनीतिकरण गरिएको हो कि?', 'कोरोना भाइरस स्रोत खोजी कार्य विश्वका बहु मुलुकमा संचालन गर्ने कुरामा तपाईं समर्थन गर्नु हुन्छ?' र 'विश्वव्यापी कोरोना महामारी जित्नका सबैभन्दा जरूरी कार्य के हो?' भन्ने रहेका थिए।
'कोरोना भाइरस स्रोतको खोजी कार्यलाई राजनीतिकरण गरिएको हो कि?' भन्ने पहिलो प्रश्नमा ८० प्रतिशतले कोरोना भाइरस स्रोत विषयलाई राजनीतिकरण गरिसकेको ठहर गरेका छन्।
दोस्रो प्रश्न 'कोरोना भाइरस स्रोत खोजी कार्य विश्वका बहु मुलुकमा संचालन गर्ने कुरामा तपाईं समर्थन गर्नु हुन्छ?' मा प्राप्त नतिजा ट्वीटरमा अंग्रेजी, स्पेनेली, फ्रान्सेली, अरबेली र रूसी भाषाका ८३ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले समर्थन दिएका छन् भने फेसबुकमा ७९ प्रतिशतले समर्थन दिएका छन्। चिनियाँ माइक्रोब्लग विइपोमा समर्थन दर ९३ प्रतिशत रहेको छ।
'विश्वव्यापी कोरोना महामारी जित्नका सबैभन्दा जरूरी कार्य के हो?' भन्ने तेस्रो प्रश्नमा ‘खोप आपूर्तिको विस्तार, चिकित्सा उपचारको प्रवर्द्धन, भाइरस स्रोतको तुरून्तै खोजी, महामारीग्रस्त क्षेत्र बन्द र सीमित रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई खुकुलो पार्नु’ ५ वटा छनोट रहेका थिए। सर्वेक्षणमा सहभागीहरुले खोप आपूर्तिको विस्तार, चिकित्सा उपचारको प्रवर्द्धन र महामारीग्रस्त क्षेत्र बन्द छनौट गरेका छन् तर भाइरस स्रोतको तुरून्तै खोजीलाई कसैले पनि रोजेका छैनन्। उक्त सर्वेक्षणमा सहभागीहरुले लेखेका टिप्पणीहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएका शब्दहरूमा ‘राजनैतिक दबाव', 'अमेरिकी नाकाबन्दी', 'संचारमाध्यममाथि नियन्त्रण', 'आर्थिक आपूर्ति' र 'चीनको विकासमा रोक’ रहेका छन्।